इन्द्रेणीमा समेत तेजेन्द्रले यस्तोसम्मको झुट बोलेको खुलाशा, पहिले देखि सचिनलाई चिन्ने दिदि आइन मिडियामा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
इन्द्रेणीमा समेत तेजेन्द्रले यस्तोसम्मको झुट बोलेको खुलाशा, पहिले देखि सचिनलाई चिन्ने दिदि आइन मिडियामा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
April 20, 2021 AdminLeaveaComment on इन्द्रेणीमा समेत तेजेन्द्रले यस्तोसम्मको झुट बोलेको खुलाशा, पहिले देखि सचिनलाई चिन्ने दिदि आइन मिडियामा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
धेरै पछि सचिन परियारलाइ हुर्काएर स्याहार सुसार गरेकी र जन्मदिने आमाकी साथी चर्चित गायिका निशा श्रीसले आज मिडियामा आएर सत्य तथ्य खोलेकी छिन । चर्चित बाल गायक सचिन परियारको उनकी आमालाई भेट्ने धो’का पुरा भएको छ । हिँजो बाग्लुङबाट काठमाण्डौ गएकी उनले हिँजो नै सचिनलाई भेटन खोजेकी थिईन् ।
यता सचिन परियार पनि आमालाई भेट्दा मन स”म्हा’ल्न सकेनन् । उनले विभिन्न भिडियोमा आमालाई भेट्ने मन रहेको बताएका थिए । उनले आमा छोराको लामो समयपछि भेट भएको र त्यो दृ”ष्य देख्दा कतिपयले तेजेन्द्रले ग’ल’त काम गरेको समेत बताए ।
आँ’सु नै था”म्न नसकेपछि सचिनले भने आमालाई एउटा गीत गाएर फ’का’एका छन् । मेरी आमालाई भेटेपछि आ’ईल’भयू भन्न मन लाग्छ भन्ने गीत गाएर फ’का’एका थिए । त्यस्तै उनले आफुसगं भएको पैसा आमालाई दिएर फ’का’एका छन् । हेर्नुस सचिन परियारलाइ सानै देखि हुर्काएकि दिदीले सबै कुरा खोलेकी छिन ।
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल बैसाख ०७ गते मंगलबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ अप्रिल २० तारिख